» Walaloo: AFRAN QALLOO ---- Gadaa.com Oduu – News
Walaloo: AFRAN QALLOO
Bitootessa/March 24, 2013 · Gadaa.com AFRAN QALLOO
Sabboontoota Oborraa, Baabbilee-Dagaa fi Alaa
Ramaddiin isaanii Afran Qalloo jalaa
Mee xiqqon dubbadhaa hundi keessan laalaa.
Aartii Oromoodhaaf tan bu’ura taate
Waggaa shantam dura gaafas tan hundooyte
Artistoota jabaa akkaan nuuf oomishte
Shabboo fi Birra; Qophes dabalatee
Abubakariif Shantam si keessaan dhalatee
Arra isaanumaan Oromoon dhaaddate.
Gootummaa isaanii garsiisuun ifatti
Miidhaa sabaatiif laalatuun sirritti
Diinatti duulan sodaadhaan maletti
Meeqaantam dammeeysuun hiriirsan qabsotti
Dhugaan Afran Qalloo madda hayyootaati.
Duree qabsoo ilmaan Oromootaa
Hundee fi burqaa gootootaa
Madda beeytootaa fi sabboontootaa
Kanaaf Oromoonni isiniin dhaaddata.
Murna beekaa guddaa kan Bakrii Saphaloo
Wirtuu dammaqinaa ilmaan Afran Qalloo
Seenaadhaan qulqulluu hin qaban hammeenya
Itti wareegaman qabsoo saba keenyaa
Isaaniin boonnee nuuf tahan fakkeenya.
Kanneen diinaan lolan didanii cunqursaa
Kan diinatti bane jalqaba dhukaasa
Elamoo Qilxuu kan boonse sabasaa
Jaarraa Abbaa Gadaas maddi isaan keessaa
Seenaatu dubbatee waa hin taatu dhooysaa
Dhugaan Afran Qalloo qabsoof gadaameessa.
Warreen du’aan galan addunyaa tanarraa
Kanneen addaan saaquun nutti agarsiisan karaa
Waan isaan gad dhaaban amma itti jirraa
Kan du’an raahmata, kan jirtan nuuf waaraa.
Kan gaarii dalage gaariidhaan faarfama
Kan hamtuu hoojjates hamtuu isaat himama
Kaayyoon Afran Qalloo jalqaba ganama
Tokkummaan dammeeysuun Oromoo hundumaa
Hiddaan buqqaasanii sirna gabrummaa
Harkatti galfachuudha qabsoon bilisummaa
Kanumaafin faarse, faarsuutu dirqama.
Isaan faarsuun kiyya gosa qooduu mitii
Dhuguman dubbadhee kan arge ifatti
Oromoon Afran Qalloo madda hayyootaati!!
9 Comments	Jaalataa Sabaa said,
Dhugaa fi jecha
karaa deemaa said,
March 24, 2013 @ 11:13 am
dhugaa keeti kun gosumma mitii jabaadhu
Geetu Mangashaa said,
Walaloo baay’ee baredu fi dhamsa gari qabdu. Akka galme sena erati agareti afran qalloo gahee guddaa qabso saba keenyaf buste.
Dhugaadh! Afran qalloo oromoodhaaf waan hunda.oromummaan maal akka ta’e kan nu barsiisan isaanidha .odoo isaan jiraa baatan oromumman amma farsinu tun silaa darajaa kana ga’u hin dandeechu. Bakka Shabboon, Birraan fi kanneen hafan jirreeti aartin fi qabsoon oromoo baaye gad aanaanaa ta’a. Kan hoon jedhu Abdullaahi jirmaa fi Lagasaa Abdii hin hojeenne jechuu koo miti.walumaagalatti afran qallo oromoon hundi akka oromoo ta’uu isaatin boonu godhaniiru.
belay taffese said,
Jechii kuun dhugaadha dhoksamuu waantatu.mada qaroominna kama himeen akkam dhisaa ayyicha oromo bakir saaphalo qubbe afaan oromo kan kalaqee.
March 24, 2013 @ 5:48 pm
Jabaadhu halaan gaari dhaamsa cimaa qaba galanni isaani bilisumma ha tahuu
Heddu walaloo bareeddudha jabaadhu itti fufi!
barento oromoo said,
March 25, 2013 @ 8:06 pm
dhugaa keeti haqa jiru nuuf himte .oromoo hundaatu ittiin boona .kun gosummaas miti.qooddii gosa tokkollee miti .oromoo naannoo biraatin walbira hin qabne ykn walhin dorgomsiifnee.gahee afran qalloo qabsoo keessatti qaban qofa barreessite jabaadhu.
Galatoomii jabaadhu! Walaloon kee baayee miidhagaadha,Afran Qalloon kanaa olis jaja mu dhugaadha karaa hundaan waan keenya haa ibsannu ammas ittifufi!